Xubno ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab oo howlgal lagu dilay | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Xubno ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab oo howlgal lagu dilay
Xubno ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab oo howlgal lagu dilay
Taliska ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya ayaa sheegay in la toogtay xubno ka tirsan Al-Shabaab oo Beledweyne ku dilay sarkaalkii hoggaaminayay howlgalkii lagu qabtay Degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan.
Talyaha guutada 5-aad qeybta 27-aad Maxamuud Ibaraahim Xasan Baakay oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in raggaan ay ka qeyb qaateen dagaallo badan oo ka dhacay Beledwayne iyo Maxaas isla markaasna ay caqabad ku ahaayeen amniga degmooyinkaasi.
Dhinaca kale Talye Baakay ayaa sheegay in ay wadaan howgallo ka dhan ah Al- Shabaab isla markaana uu jiro qorshe lagu xoreynayo degmooyinka ka tirsan gobolka Hiiraan halkaasi oo ay kamid yihiin dhulka buuraleyda oo ay Al-Shabaab ku dhuumalaystaan.
Magaalada Beledwayne ee xaruunta gobolka Hiiraan ayaa mararka qaar waxaa ka dhacay falal amniga lid ku ah kuwaasi oo loo geysto shacabka iyo mas’uuliyiin dawladeed iyadoo laamaha amniga ay sheegaan in ay wadaan qorshe lagu sugayo amniga.
Maqaal horeGalmudug oo ku guuleysatay xal u helidda muran dhinaca dhulka ah
Maqaal XigaHanti dhowraha guud ee Qaranka oo ka qeyb galay shir Caalami ah